रूकुम पश्चिम घटना : पीडितको पक्षमा नि:शुल्क बहस गर्दै अधिवक्ता गौतमका बाबुछाेरा
Law Hub Nepal असार ५, २०७७
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नवराज गौतम र उनका छोरा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम (आरसी) ले रूकुम पश्चिम घटनाको पिडित पक्षका तर्फबाट बहस गर्दैछन् ।
रूकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा घर भएका अधिवक्ता बाबुछोराले अदालतको बेन्चमा बसेर एउटै घटनामा बहस गर्ने संयोग जुरेको हो ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत चर्चामा रहेको रुकुम पश्चिमको सोती घटनाका पीडितको पक्षमा नि:शुल्क बहस गर्न उनीहरूको जस्तै संयोग पारिवारिक जीवनमा कमैलाई पर्न सक्छ ।
दुवै बाबुछाेराले शुक्रबारदेखि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा पीडितको पक्षमा एउटै बेन्चमा नि:शुल्क बहस गर्दै छन् । गत जेठ १० गते चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ सोतीमा​ ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको शुक्रबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएकाे हाे । बहसको लागि वादी र प्रतिवादी पक्षमा बहस गर्न धेरै अधिवक्ताहरू रुकुम पुगेका छन् ।
रुकुम घर भएका आरसी गौतम पनि काठमाडौंबाट पीडितको पक्षमा बहस गर्न रुकुम पुगेका हुन् । काठमाडौं कार्यक्षेत्र बनाएर बहस गर्दै आएका आरसीको लागि यो घटनाको बहस ऐतिहासिक अनुभव बन्नेछ ।
आरसीले बहस गर्न थालेको सात बर्ष पुग्यो । जन्म दिने बाबा सँगै पहिलो पटक पीडित पक्षको तर्फबाट बहस गर्न लागेकाले आफ्नो लागि यो नयाँ अनुभूति पनि हुने आरसी बताउँछन् ।
दुवैजनाले पीडितको तर्फबाट नि:शुल्क बहस गर्ने उनले बताए ‌ । आरसी बुवाकै प्रेरणाले कानूनी क्षेत्रमा लागेका हुन् ।
आरसीका बुवा नवराज वरिष्ठ अधिवक्ता तथा रुकुमका पहिलो विद्यावारिधी गर्ने व्यक्ति हुन् । उनले २०३६ सालदेखि रुकुम जिल्लामा बहस गर्दै आएका छन् ।
सोतीको दुःखद घटनाले बाबुछोरालाई सँगै बहस गर्ने अवसर जुराइदिएको छ । समयले कहिलेकाहीँ बाबुछोरालाई वादी र प्रतिवादीको पक्षमा बहस गर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्नेे भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गौतमले यसपटक छोरा सँगसँगै वकालत गर्ने नयाँ अनुभव हुनेे पनि बताए ।
परिवारका चारजना अधिवक्ता
डा. नवराज गौतमको परिवारमा चारजना अधिवक्ता छन् । एक मात्र छोरी रमा गौतम सहित २ छोराहरु पनि अधिवक्ता छन् । बुवा डा. नवराज गौतम, छोरी रमा गौतम, छोराहरु बिनोद गौतम र आरसी गौतम । उनीहरू चारैजना अधिवक्ता छन् ।
छोरी रमा गौतम नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रुकुमको सभापति समेत छिन् । दुई छोरा अधिवक्ता छन् भने जेठो छोरा रमेश गौतम सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । अर्का छोरा मधुसूदन गौतम कानुनकै बिद्यार्थी भएपनि उनी अहिले सरकारी सेवामा छन् ।
रूकुम पश्चिम घटना
गएकाेे १० गतेका दिन रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा ३४ अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले जेठ ३२ गते आइतबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, जातीय छुवाछुत लगायतका कसुरमा ३४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा दायर भएको मुद्दाबारे जिल्ला अदालतमा सोमबारदेखि नै बहस सुरु भएपछि बिहीबार पक्राउ परेका २९ जनाको बयान सकिएको छ । शुक्रबारबाट भने अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नं.४ रानागाउँका नवराज विकले रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीकी मल्ल थरकी आफ्नी प्रेमिकालाई लिन भनेर १८ जना साथी सहित सोती पुगेका थिए । केटीतर्फका आफन्त र गाउँलेहरूको आक्रमणमा परेर उनीहरुमध्ये ६ जनाको ज्यान गएको थियो ।
प्रेमिकालाई बिहे गरेर लैजान भन्दै जाजरकोटबाट आएका युवामाथि गाउँलेले आक्रमण गरेका थिए । जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, गणेश बुढा मगर, सञ्जु विक, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकाका टीकाराम नेपालीको घटनामा ज्यान गएको हो । ६ जनाकै शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो । यो समाचार उज्यालो अनलाइनले प्रकाशित गरेको छ ।
(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न यहाँ क्लिक गरी हाम्रो पेेज लाइक गर्नुहोस् ।)